Dazzle Smile | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Nahazo ny nifinao dia afaka maka vola be sy mandany fotoana. Misy be dia be ny fomba sy ny teknolojia vidiana ankehitriny ny mahafotsy nify izay afaka miainga avy amin'ny fanafody voajanahary rehetra ny tena farany tao technology.This lahatsoratra mampiseho ny iray mamaky raha tianao voaporofo nify-Whitening toro-hevitra izay miasa haingana sy amin'ny fomba mahomby.
Fa ny vokatra haingana indrindra, mitady matihanina Whitening asa. Mety ho maka vitsivitsy fitsidihana fohy, ary ny vokatra miavaka dia haharitra ho maro maharitra. Ny nify Whitening mixtures fa ny mpitsabo nify no mahazo dia mahomby kokoa noho izay mety ho hitanao eo an-toerana fivarotana zava-mahadomelina.
SOSO-KEVITRA! Mba hihazonana fotsy, madio nify, nify tapaka cleanings dia tsy maintsy. Ataovy azo antoka ny haharaka ny enim-bolana amin'ny alalan'ny nandamina fotoana be dia be ny fotoana mialoha.
Vitsivitsy fitsidihana nify ny nify fotsy. Dentists Afaka mampiasa Whitening nify fomba izay tsy azo vidiana ny-ny-latabatra.
Afaka mampiasa frezy mba mahafotsy ny nify. Ny organika no mahaforona ny frezy dia afaka manampy mahafotsy ny nify tsy henjana simika. Puree frezy mba hanao namboarina toothpaste, na manosotra frezy vaovao mivantana amin'ny nify.
SOSO-KEVITRA! Raw sakafo, indrindra fa ny voankazo sy ny legioma mitandrina ny nify salama. Ampiasaina sy ny sakafo mahasalama, tsy miverina ny nify mavo, fa mety ihany koa ny mahatonga ny lavadavaka.
Voasarimakirana sy ny voasary anao vitamina C, Nefa ireo koa dia nify-Whitening properties.Rub ny ao anatiny ny Peel manohitra ny nify ho saro-takarina Whitening vokany. Azonao atao ihany koa ny manampy kely ny sira ny peels mba hanatsarana ny vokatra hita maso fa ity no hanolotra fomba.
Ampiasao ny torolalana voasoratra tao amin'ny Whitening vokatra. kosa, dia mety hahatonga fahasosorana hihy sy ny vava, , ary mety hahatonga fahavoazana goavana nify. Mampiasa nify Whitening vokatra marina ihany araka ny nampianarina ny fonosana.
SOSO-KEVITRA! Ny tsotra nefa mahomby voajanahary fananana dia mofo soda. Voatsatso rano, dia afaka manampy mahafotsy ny nify.
Ny zava-dehibe voalohany, rehefa miezaka ny hitandrina ny nify dia ny fahazoana araka ny tokony nify cleanings. Get ny nify nanadio isaky ny enim-bolana, ary hahatonga ny fotoana ho avy raha mbola ao ny birao noho ny amin'izao fotoana izao ny fanadiovana.
Ny zavatra tsara indrindra azonao atao ho manana ny fotsy tsiky dia ny mitsidika tsy tapaka ny mpitsabo nify ho an'ny cleanings. Pahazarana mandamina cleanings ireo indroa isan-taona. Raha ny atao amin'ny fanadiovana, nanangana ny fotoana manaraka ka tsy manadino. Get ny birao mba hanome anareo fampahatsiahivana-telefaonina.
SOSO-KEVITRA! Teeth Whitening toothpaste dia tsy tena be mitovy amin'ny tsy tapaka toothpaste. Tsy tena hevitra tsara indrindra mba handany vola amin'ny vokatra izay tsy ho betsaka ny fahasamihafana.
Mihinàna sakafo mahasalama; sakafo manta toy ny voankazo ireo ohatra tonga lafatra. Alaviro ireo isan-karazany ny sakafo mba hahazoana antoka Ny nifinao dia salama nify. Tokony koa tsy snacking, rehefa mikendry ny mahafinaritra tsiky.
Misotro alalan'ny mololo dia iray amin'ireo tetika kely maro izay afaka manampy foana fotsy nify. Raha toa ianao ka mampiasa ny mololo, ny rano dia tsy mety ho tonga amin'ny nifandray ho etỳ ambonin'ny ny nify. Ny ranon-javatra dia hialana ny nify sy midina ny tenda.
SOSO-KEVITRA! Mba hanatratrarana ka omeo fotsy nify, miborosy sy floss ny nify isan'andro tsy tapaka. Raha manao izany, dia manala ny hanorina ny takelaka izay mahatonga ny nify discoloration.
Izany no tsara voarakitra setroka sigara zava-misy fa vokatry ny fifohana sigara sigara discolors ny nify isaky ny inhale.
Ny fananana Whitening nanao araka ny mpitsabo nify tena miankina amin'ny fomba haingana mila valiny, ary fomba fijery tena ny nify efa voaloto. Na izany dia ho lafo kokoa, dia mety hiafara amin'ny haingana, mahavariana kokoa noho ianao vokatra mety hahazo alalan'ny Whitening hafa teknika.
SOSO-KEVITRA! Divay mena connoisseurs, indrindra fa ireo manahaka tapaka, mirona ho manana nify discoloration. Ny divay mena loko dia variana eo an-nify ny karazana verinia, izay mahatonga azy ireo mainty.
Tapaka toothpastes sy Whitening nify pastes no mahagaga similar.You tsy mila mandany ny vokatra izay tsy manova ny hafotsiany ao an-nify. Ianao no mandany ny fotoana sy ny vola fa tsy hanome anao ny soa.
Raha mifoka sigara, rehefa izany dia tokony hijanona mba manana vintana ny Whitening ny nify. Matihanina Whitening fomba iray manan-danja vidin'ny vola. Raha toy izany ny fomba natao ary avy eo dia mandrehitra sigara, efa hatsipy izany vola izany izy. Ny Whitening ho haingana nofoanana ny fifohana sigara.
SOSO-KEVITRA! Zava-dehibe ny miborosy, hihy fanorana, ary floss indroa isan'andro, fara fahakeliny. Miborosy sy ny flossing taorian'ny sakafo maivana sy ny koba rehetra dia afaka manampy ny nify hijanona fotsy.
Miborosy nify tsara rehefa avy misakafo dia ampahany manan-danja amin'ny fitandremana azy ireo tsy discoloring. Izany dia tena marina raha ny amin'ny kafe.
Anontanio ny mpitsabo nify ho Whitening gel fa ho ampiasaina ao an-trano mba hanazava ny tsikinao. Io fomba ny mpitsabo nify Tafiditra manome anareo amin'ny vava lovia fa ho hameno amin'ny gel sy mampihatra ny nifinao Fa nisy fe-potoana isaky ny alina nandritra ny herinandro maro. Izany dia midika hoe nilaza izany teknika dia afaka mahafotsy ny tsikinao hatramin'ny valo matoatoa mamiratra.
SOSO-KEVITRA! Raha amin'izao fotoana izao bevohoka, hanajanona ny fampiasana na inona na inona ny nify Whitening vokatra! Ireo entana’ sakafo dia mety ho mampidi-doza ny fitomboan'ny zaza. Whitening toothpastes matetika ekena ampiasaina mandritra ny fitondrana vohoka, fa jereo amin'ny dokotera na mpitsabo nify mba ho azo antoka.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hahazoana antoka ny nify atao hoe, raha manana fotoana ho an'ny mitsidika tsy tapaka ny mpitsabo nify mba hanadio azy ireo.
Andramo ny fampiasana ny miborosy nify izay specializes amin'ny Whitening. Mety mandray volana mba hahazoana vokatra. Mouthwashes ireo dia mirakitra ny Whitening simika antsoina hoe hydrogène peroxyde. Izany tena mora ampiasaina. Fotsiny hosasany izany indroa isan'andro tokony ho antsasaky ny minitra eo anoloanareo miborosy nify.
SOSO-KEVITRA! Flossing Zava-dehibe. Flossing manampy manala ny takelaka, izay mety hahatonga discoloration ny nify.
Mihinana paoma no fomba lehibe mba hanome ny nify ny fiheverana ny maha fotsy noho izy ireo raha ny marina dia. Manopy ny sakafo sy ny legioma manana Marokoroko sy toetra izay afaka manampy anao manadio ny nify nefa tsy voatery be fahasimbana eo amin'ny karazana verinia.
Mahafotsy ny nify ny efa lany lalana namafa azy ireo amin'ny Walnut hodi-kazo. Namafa izany amin'ny nify tsara manadio azy ireo ary mahatonga azy ireo fotsy. Aza adino ny hosasany ny vavanao rehefa mampiasa hodi-kazo avy, ary avy eo dia miborosy.
SOSO-KEVITRA! Lanin'ny lehibe kokoa dairy be ny sakafo. Foods toy ny ronono, fromazy sy ny yogurt manana mineraly rehetra izay afaka manampy hanome anareo ny mahery, tsara tarehy nify fa maniry.
Afaka mampihatra ny hidrôzenina peroxyde ny mahafotsy ny nify. Afaka manao izany fotsiny amin'ny alalan'ny mandroboka ny washcloth na landihazo niara-nanatsoboka ara-nofo an-vahaolana. Hahosotrao ny lamba mando ny faritra ny nify rehefa avy ianao nampihena azy. Ny peroxyde dia miasa mba hanamaivana stains sy ny lamba manampy hampitraka azy ireo.
Ampiasao ny helo-drano ravina sy ny voasary peels mba hanao tsara vovoka. Add rano izany vovoka sy borosy amin'ny mifangaro ity. Ankoatra ny Whitening nify, izany dia hanampy mba hisorohana hihy aretina sy ny lavadavaka.
SOSO-KEVITRA! Ny hodi-kazo avy amin'ny hazo Walnut dia azo ampiasaina ho toy ny nify whitener. Namafa ny hodi-kazo faritra manerana ny mpitsabo nify, dia hahatonga azy ho afaka hampitraka stains sy mavo horonantsary avy amin'ny nify.
Raha ny loko ny nify no mahasorena anao, hevitra ny mpitsabo nify ho an'ny safidy. Ny olona sasany mihevitra Whitening nify dia simbasimba fandaniana, na raha manana nify eny mena manomboka vokany fomba fiainanao ny fiainanao, dia mety ho very maina izany, satria mety hanangana ny hatoky tena.
Alohan'ny manandrana nify Whitening amin'ny manokana, ho azo antoka foana ny hanontany amin'ny mpitsabo nify voalohany. Indraindray voapentimpentin'ny nify azo ferana amin'ny alalan'ny nanangana tsara kokoa ny fahadiovana. Anontanio ny mpitsabo nify momba ny mety ny mampiasa Whitening vokatra. Ny mpitsabo nify dia afaka manoro hevitra anao ny amin'ny vavanao na dia ao amin'ny toe-javatra mba hanomboka fampiasana ireo karazana vokatra. Lavadavaka na ny hihy aretina dia ratsy ihany raha mampiasa ny nify Whitening vokatra eo aminy.
SOSO-KEVITRA! Mila tsy kafe sy ny dite raha te-foana ny tsikinao fotsy. Misotro tafahoatra vola azo, rehefa ela, hiteraka manan-danja staining.
Raha te fotsy nify, hampihatra ny akanjo Vaseline ny nify. Mety tsy ho tsara tsirony, fa izany dia hanome fiarovana sakana eo amin'ny nify sy ny stains nandritra ny ora maro.
Rehefa avy mihinana, mitsako sasany hihy hanampy mahafotsy sy manadio ny nify. Ny sasany mitsako ramy no tena novokarina mba mahafotsy nify, ary koa mba hiaro azy fotsy. Ramy mampiseho ireo tasy-ady sakafo izay hitandrina ny nify mamirapiratra. Ny siligaoma rora ihany koa ny mamokatra voajanahary izay hanampy manasa poti-kanina avy amin'ny nify.
Mavo nify dia mora foana ny olona iray fitarainana famantarana izay smokes. Mety ho sarotra foana fa fotsy nify tsiky raha mifoka. Raha toa tsy maintsy hifoka sigara, Tena tokony hampihenana hatraiza ny mifoka handray soa ny fahasalamanao sy ny tsikinao.
Anontanio ny mpitsabo nify raha afaka manome anao ny gel azo ampiasaina ao an-trano Whitening maika. Io fomba mety mahafotsy ny nify amin'ny alalan'ny hatramin'ny valo matoatoa mamiratra.
Raha tianao ny nify mba ho fotsy mangatsakatsaka, ve no tokony ho fotoana fanadiovana nify tapaka. Nify tapaka cleanings no eo amin'ny fomba mahomby indrindra azonao tafiditra ao amin'ny nify Whitening regimen. Mila mitsidika ny mpitsabo nify, fara fahakeliny, indroa isan-taona.
Whitening gels dia natao ny mahafotsy ny nify fotsy. Azonao atao ny mividy izany ao amin'ny zava-mahadomelina gels fivarotana, ary izy ireo mora noho ny hatao ny nify whitened iray mpitsabo nify. Raha mijery ny nify salama na tena discolored, dia tokony handeha ho any amin'ny mpitsabo nify voalohany.
Miborosy nify eo mifoha, ary raha vao ianao te-handeha ho any am-pandriana ny mahita ny nify mahazo fotsy.
Miborosy nify no tena mampirisika ny discoloration ny nify discoloration.Ask ny mpitsabo nify raha ianao na tsy manana nify fa afaka manohitra ny vokatry ny fampiasana miborosy nify.
Hidrôzenina peroxyde dia tsy azo antoka fomba mahafotsy nify. Tena mampidi-doza ary mety tena hamela ny nify mba ho tonga bebe kokoa discolored. Aza vokatra rehetra izay manana peroxyde hidrôzenina, raha ny nify salama tsy ampy.
Izany dia tena soso-kevitra fa efa ny nify whitened alohan'ny fahazoana tariby braces.You dia ho faly rehefa mahita ny vaovao satria tsiky dia straighter ary mihatsara tsiky!
Mpitsabo nify matihanina afaka mampiasa akora bleaching niaraka tamin'ny manokana jiro izay mety mahafotsy nify araka izay 15 matoatoa tena haingana. Io karazana paika dia matetika no lany manodidina ny diman-jato dolara ny fivoriana.
Raha mijery foana ny nify, nefa matromatroka, na mavo, Diniho ny toerana tena zava-pisotro na mety ho ny tsiny. Red divay sy ny kafe dia fantatra mba hampietreny nify. Ampiasao ny mololo, rehefa misotro zava-pisotro ireo mba hametra ny fotoana fifandraisana amin'ny nify fifandraisana.
Ataovy ny frezy toothpaste noho ny fanilihana nify. Frezy dia Whitening vokany eo amin'ny nify. To afangaro ny sasany Mametaka ho anao, manambatra ny rano (1/4 kapoaka), leviora (1/2 kapoaka) ary telo frezy izay efa nopotsehina.
Afaka manao ny nify manana fotsy niseho amin'ny alalan'ny fanaovana ny tsara alokaloka lokomena loko. Bright lokomena mena dia hahatonga discolored nify, satria izy ireo dia mazàna no hijery mainty. Ny tsara indrindra ho an'ny discolored loko nify dia pinks na miboridana matoatoa va no.
Mahazo ny fotsy nify tianao dia mety ho lafo vidy, ary somary ny manahirana. Misy fomba maro azo mba hanampy amin'ny ezaka ny mahazo fotsy nify. Ampiharo ny toro-hevitra nalahany teo eto, mba hahafahanao mahafotsy ny nify tsy mahazo ny dingana natao tamin'ny mpitsabo nify matihanina.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 12:44 AM
Sokajy: Mahafotsy Teeth Tips Tags: Dazzle Smile, Smile Dazzle, nify salama, nify mavo, vitamina C